बुटवलको कोरोना अस्पतालबाट ४ जना डिस्चार्ज- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १८, २०७७ अमृता अनमोल
बुटवल — बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत ४ जना संक्रमित आइतबार डिस्चार्ज भएका छन् । अस्पतालमा चिकित्सकको निगरानीमा राखिएका उनीहरुमा पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले स्वस्थ्य व्यक्ति सरह आहारविहार गरेका उनीहरुलाई आफ्नो समूदायमा गएर कोरोनाबाट बच्‍ने उपाय सिकाएर पठाएको बताए । ‘कुनै औषधीमूलो गरिएन,’उनले भने, ‘मात्र पोषणयुक्त खाना दिनको ४ पटक खुवाउने र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा सजग गराउने काम गर्यौं ।’
उनीहरु कपिलवस्तु र रुपन्देहीका हुन् । अस्पतालमा ल्याएपछि उनीहरुको ३ पटक कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । लगातार २ पटकको परीक्षण नेगेटिभ आएपछि उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्ट डा. राजेन्द्र खनालले बताए । उनीहरु घरमा गएपनि अरु व्यक्तिसंग घुलमेल हुन पाउनेछैनन् । ‘उहाहरु २ हप्ता होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेछ,’ उनले भने,‘२ हप्तापछिको स्वाब परिक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि मात्रै सर्वसाधारण सरह घुलमेल हुनुहुनेछ।’
संक्रमितमध्ये कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका-८ का २ जना वैशाख ३० गते अस्पताल आएका थिए । उनीहरु दुवैजना भारतको मुम्बईबाट वैशाख १३ गते कपिलवस्तु आएका थिए । कपिलवस्तुकै बुद्धभूमि नगरपालिकाका युवा वैशाख ३० गते अस्पताल आएका थिए । उनी वैशाख १४ मा भारतको दिल्लीबाट आएका थिए । यस्तै रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका युवा वैशाख २९ मा अस्पताल ल्याइएका थिए । उनी पनि भारतबाको मुम्मइबाट आएका थिए ।
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा अब ३२ जना बिरामी छन् । त्यसमध्ये एक जना आईसीयुमा छन् । अन्य सामान्य छन् । अहिलेसम्म १५ जना संक्रमित निको भएर गएका छन् । अस्पतालका मेसु खनालले अब लक्षण नदेखिएका र सामान्य प्रकृतिका कोरोना संक्रमितलाई भर्ना नगर्ने बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १९:१३
जेष्ठ १८, २०७७ दुर्गालाल केसी
दाङ — क्‍वारेन्टाइनमा खटिएका दुई जना स्वास्थ्यकर्मीसहित जिल्लामा आइतबार थप नौ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको जनता मावि क्‍वारेन्टाइनमा खटिएका लमही नगरपालिका १ का ४० वर्षीय र राप्ती गाउँपालिका ८ का ३६ वर्षीय पुरुष स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएको गढवा स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । उनीहरुको स्वाब राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा परीक्षण गरिएको थियो ।
लकडाउन भएपछि दुवै स्वास्थ्यकर्मी क्‍वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको गढवा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाशचन्द्र चौधरीले बताए । ‘उहाँहरु सुरुदेखि नै क्‍वारेन्टाइनमै खट्नुभएको थियो । सुरुमै त्यही क्‍वारेन्टाइनमा रहेकालाई कोरोना देखिएको थियो,’उनले भने,‘पछि स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि देखियो । उहाँहरु आजसम्म घर जानु भएको छैन । क्‍वारेन्टाइनमै बसेर त्यहीं रहेका मानिसहरुको सेवामा खट्नुभएको थियो ।’
यसैगरी गढवाको उक्त क्‍वारेन्टाइनमा बसेका गढवा ६ का ३६ वर्षीय र गढवा ७ का २४ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । दुवै जना भारतबाट आएर क्‍वारेन्टाइनमा बसेका थिए । गढवामा जिल्लामै पहिलोपटक भारतबाट आएका दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि अन्यमा पनि संक्रमण फैलिएको हो । चारै जनालाई कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डी पठाइसकेको चौधरीले जानकारी दिए ।
यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ५ जनामा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा तुलसीपुर ६ का २० वर्षीय, १५ का ३२ वर्षीय र १६ का १८, २० र २३ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिष्ठानका कामु रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देवले बताए । उनीहरु तुलसीपुरको गुरुजजुर मावि रक्षाचौर क्‍वारेन्टाइनमा बसेका थिए । योसँगै दाङमा संक्रमितहरुको संख्या ३७ पुगेको छ । तीमध्ये गढवाका एक र तुलसीपुरका एक पुरुष कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १९:११
प्रदेश ५ का १६ सय ९४ कोरोना संक्रमित घरमै